Semalt Expert Anotsanangura 15 Black Hat SEO Mazano Anogona Kuparadza Bhutiro Yako
Munguva pfupi yapfuura, Google uye mamwe injini dzekutsvaga dzave dziri pakutsvaga nzvimbo dzekushandisa dzinoshandisa tsvina yeSeO tactics. Panyaya iyi, zvinova pachena kuti mhando yekasi yeSeO inozopedzisira yaisa mawebsite panzvimbo pangozi.
Jack Miller, nyanzvi inotungamirira Semalt , inotsanangura pano maitiro matsvuku eSEO anokwanisa kukanganisa kutanga kwese achiedza kukura mukutengesa internet.
Ndiyo inonyanya kuve yakasvibirira yefu yeSeO maitiro ekukwezva motokari kune webhusaiti kuburikidza nekunyengera. Iyo inobvumira muridzi wepaiti kuti ape URL yakasiyana zvachose kana zvinyorwa kune mushanyi webasa uye izvo zviripo pane injini yekutsvaga
2. Gateway kana Doorway Mapeji
Inotsanangura mapeji akaiswa pasi, akaiswa pasi uye, zvachose pamusoro pekugadziriswa nemashoko akaoma echinhu ane simba risinganzwisisiki. Mapeji haawani chero ruzivo runobatsira, rwakakodzera kana ruzivo. Vanongova nemashoko makuru akapfuma anobata vaenzi nekucherechedza ivo kune imwe nzvimbo yepawebhu.
Chimwe chezvinhu zvinodiwa pakutsvaga injini ndeye chivako chekubatanidza . Iyo nzira haisi nyore uye inosanganisira zvakawanda zvekuedza, kunaka, nekushanda zvakaoma. Zvikwata zvakabhadhara zvinogadzirisa zvinhu zvose kune vadzidzisi vepanzvimbo. Havana pfungwa pamusoro pehutano hwehuwandu hwemashoko, asi shandisai zvinyorwa zvinyorwa zveanchor kana kuti zvibatanidza pamwe nezvinofungidzirwa zviri mukati. Inofungidzirwa sehomwe yekasi SEO zano.
4. Hidden Links uye Zvinyorwa Zviduku
Inonyanya kutyisa chikwata chetsva che SEO, iyo vatenzi vemaiti vanobatanidza zvinyorwa zvisingabvumirwi uye magwaro ari pasi pebhidhiro kana kuti makona uko maviri ari maziso asingaoneki. Zvinyorwa nezvisungo zviri zvemuvara wakafanana nechekare uye naizvozvo kuisa chero chinhu chipi zvacho chinonyanya kuregererwa nevashanyi.
Icho kungobamba kana kuba kune zvimwe zvevanhu..Basa racho harifaniri kunge rakashamwaridzana, asi kunyange kufambidzana kwakadzingwa kunofungidzirwa kuti inopindirana.
6. Chisungo Spinning
Rinotsvaga kudzokorora kunyoresa zvinyorwa zvisiri izvo kana kushandisa kwebhoti. Zvinowanzoshamba nevatengesi vane usimbe vasingadi kufunga ivo pachavo.
Icho chiitiko chinosanganisira kuwandisa mashoko ekutsvaga kwepaiti. Muchiitiko ichi, vadzidzisi vepasi vanofananidza mazwi ekutenderera pasina meta tags.
Aya mapeji ane zvisingabatsiri zviri mukati zvinoremerwa ne hyperlinks. Spam blogs zvakasikwa nechinangwa chekuita backlinks kune mawebsite anobatanidza.
Nzira yekushandura hapana URL iyo inodzokera kune webhusaiti iyo muchengeti achaputira nekuramba achikumbira kune mushanyi.
Icho chinoreva chikamu chemasimba makuru ehurumende anobatanidza webhusaiti yemari nemagwaro ekugadzirisa anchor.
11. Peji Kutamba
Rinoreva kushandurwa kwekare kare yakakurumbira, yakanyoreswa uye yakarongedzwa peji nemigwagwa yakasiyana neyopakutanga.
Zvinoreva kuvaka gadziriro yezvinyorwa apo URL yewebhu yehutanhi yakabatanidzwa nezvinhu zvisingabatsiri uye zvishoma.
Inotsanangura kukohwa kwezvinyorwa zvekutengesa kana kutenga mazita ekutonga.
Anoreva kukopa kwevanokwikwidzana 'URL uye kusinganzwisisi nechinangwa apo pavaka chigaro chitsva.
Izvi zvinoreva kushambadzira kune vashanyi pamasangano evanhu vane mavhidhiyo asina kufanirwa nemashoko Source .